Ukuqeqeshwa Kwezokumaketha | Martech Zone
Izibalo, ukumaketha okuqukethwe, ukumaketha nge-imeyili, ukumaketha kwezinjini zokusesha, ukumaketha imithombo yezokuxhumana, nokuqeqeshwa kobuchwepheshe ku Martech Zone
Njengoba ngiqhubeka nokusebenza namakhasimende emikhankasweni yabo nasezinhlelweni zabo zokumaketha, ngivame ukuthola ukuthi kukhona izikhala emikhankasweni yabo yezokumaketha ebavimba ukuhlangabezana namandla abo amakhulu. Okunye okutholakele: Ukuntuleka kokucacelwa - Abathengisi bavame ukuhlangana nezinyathelo ohambweni lokuthenga ezinganikeli ukucaca futhi zigxile enjongweni yezethameli. Ukuntuleka kokuqondisa - Abathengisi bavamise ukwenza umsebenzi omuhle wokuqamba umkhankaso kepha baphuthelwe kakhulu
I-SocialBee: Inkundla Yezokuxhumana Yamabhizinisi Amancane Enezinsizakalo Zezokuthutha
NgoLwesihlanu, Novemba 12, 2021 NgoLwesihlanu, Novemba 12, 2021 Douglas Karr
Eminyakeni edlule, ngisebenzise futhi ngahlanganisa inqwaba yezinkundla zokuxhumana zamakhasimende. Ngisenobudlelwano obuhle nabaningi futhi nisaqhubeka nokungibona ngithuthukisa izinkundla ezintsha nezikhona. Lokho kungase kudide abafundi… bezibuza ukuthi kungani ngingamane ngincome futhi ngiphushe inkundla eyodwa yawo wonke umuntu. Angazi ngoba zonke izidingo zenkampani ngayinye ziyehluka kwenye. Kunenqwaba yezinkundla zokuxhumana ezingasiza amabhizinisi… kodwa eyakho
NgoMsombuluko, Juni 28, 2021 NgoMsombuluko, Juni 28, 2021 Douglas Karr
Siqhubekile nokusebenza kumhlahlandlela wethu wokwenza kahle kwamakhasimende ethu. Ngenkathi senza ucwaningo futhi sinikeza amaklayenti ethu okungahambi kahle nokuthi kungani kungalungile, kubalulekile ukuthi futhi sinikeze umhlahlandlela wokuthi singazilungisa kanjani izingqinamba. Lapho sihlola amaklayenti ethu, sihlala simangazwa yimizamo emincane eyenziwayo yokwenza ngcono ukutholakala kwabo kwe-Youtube nolwazi oluhambisanayo namavidiyo abawalayishayo. Iningi limane lilayishe ividiyo, lisethe isihloko,
Okwenza Amehlo Akho Adinge Amasikimu Ophelele Wombala wePhalethi… Futhi Lapho Ungawenza Khona
NgoLwesine, ngoMashi 18, 2021 NgoLwesithathu, Okthoba 13, 2021 Douglas Karr
Ubuwazi ukuthi empeleni kukhona isayensi yezinto eziphilayo ngemuva kokuthi imibala emibili noma ngaphezulu ihlangana kanjani? Angiyena udokotela wamehlo noma udokotela wamehlo, kodwa ngizozama ukuhumusha isayensi lapha kubantu abalula njengami. Ake siqale ngombala ngokujwayelekile. Imibala Ingabe Imvamisa I-apula libomvu… akunjalo? Hhayi, hhayi impela. Imvamisa yokuthi ukukhanya kukhonjiswa futhi kukhishwe kanjani ebusweni be-apula kuyenza ibonakale, iguqulwe ngu